I-Semalt Expert Illustrations Indlela yokulungisa ii-Self-Referals Ku-Google Analytics
Igor Gamanenko, uMphathi wePlayer Success Semalt , unika apha isikhokelo esiphezulu malunga nendlela yokulawula ukuzithumela kwi-Google Analytics.
Kwinkampani yethu, senza umsebenzi omkhulu woshishino kunye ne-Google Analytics. Njengomthetho, xa senza uhlalutyo lwama-analytics kubaxumi, siqhele ukufumana imiba engundoqo yokuzithumela.
Ngokufanayo, siye sithatha itoni yezonxibelelwano ngokukhawuleza ngokunxulumene nokuzilungisa ngokuzenzekelayo - bob the builder logo creator. Ngokuqhelekileyo, kwakudingeka sibhale ukubhaliswa kwebhulogi ngendlela engcono yokuzilungisa. Ukuba awunakucinge ngokungezelelwe ukuba usizalise ngokubhekiselele ukuba ngaba le post inokukunceda uqwalasele inkxalabo yakho.
Kutheni ukuzenzekelayo kwi-Google Analytics kubhekisela kuyo?
Ukuzithumela kwi-Google Analytics apho ugcina khona indawo yakho ebonakalayo kwiingxelo zokudlulisa. Ingxenye enkulu, yindawo olahlekileyo emva kwikhowudi okanye ulungelelaniso olubangela ukuba isivakashi esinye senze iiseshoni ezahlukeneyo xa kufuneka kube yinto enye kuphela.
Kwiimeko eziqhelekileyo, ukuthunyelwa ngabanye akudingeki ukuba uqalise iseshoni yesikhashana ukuze kubangele ukuzithumela.
Ngethuba elide lokuba wenze i-Google Analytics ukuba ulandelelanise iiseshoni kwiimimandla eyahlukeneyo kunye nee-subdomains zongezwayo, inqanaba elincinci lokuzimela ngokuqhelekileyo liqhelekile.
Nangona ubona ezininzi zokuzithumela kubhaliso bakho, kucingelwa ukuba kukho ingxaki.
Kutheni kucebise ukuba ulungele ukuzithumela?
Ukuzikhupha ngokuzenzekelayo kwi-Google Analytics kunokuchaphazela ukuziphatha, ukuziphatha, nokuguqula ulwazi. Okuyinxalenye enkulu yenkcazelo yakho! Kufuneka siphande.
Ukuthintela ukufumana ulwazi ngempembelelo yokuzikhusela kubangelwa ukuba kuphuhlise iiseshoni zeseshoni, ngokuyinxalenye enkulu yokuthunyelwa kweencwadi. Kwiimeko apho iseshoni somzuzu esingaqalanga, kwaye i-self-referral isenzeka, ukunyakaza okuvela kwiziteshi ezifana ngqo kunye neCCC inokuqatshelwa ngokwenene njengezithuthi ezivela ekuthunyelwe.
Abaqhubi ababini abaziintloko bee-Self-Referals kwi-Google Analytics
Iinkalo ezimbini ezibalulekileyo zokuzithumela zivela kwi:
Ukucwangcisa ukusekwa kwesiseko sokulandelela isikhala
Ikhowudi elandelayo elahlekileyo kwiqonga
Ukuba ungekho ikhowudi elandelayo kwiplatifti, oku kuya kukwenza iseshoni iphele kwaye enye iseshoni iqale njengoko umthengi ehluma kwikhasi elilandelayo kwiwebhusayithi yakho equka ikhowudi yokulandelela.
Ukuhlaziywa: iiNgxaki ezongezelelweyo ezenza iziphumo zokuzimela
Emva kokubeka amanani amaninzi eengxaki zokuzithumela, siye saqakraza izizathu ezibini zokuzimela:
Ukusetyenziswa kakubi kweelayibhile ze-UTM kwiinkcukacha zangaphakathi
Ukulawulwa kolwazi lweentloko
Ukuba ubeka i-label ngaphakathi kwimeko ye-UTM, misa ngomusa. Kunoko, qha ga mshelana nathi ngoncedo usebenzisa izilinganiso zesiko kunye neziteshi ukulandelela iimfazwe zakho zangaphakathi. Unobunono obuninzi kwaye aluyi kubhala ngaphezulu apho ukunyakaza kuqala kuvela khona.
Kwixesha elihle lokuba ukhangele zonke iinkxalabo eziyaziwayo, kwaye uqwalasela ulwazi lwe-header ingaba yinkxalabo, qha ga mshelana nathi ukuze uthole iinkcukacha ezingaphezulu.
Ukwahlula iziThumo eziZodwa kwiNgxelo yeNtetho (Presentation Page)
Ukuqonda oko kukubangela ukuba ukuzithumela kwakho kubonakale kumanyathelo amathathu. Kwisigaba sesithathu, sikuqulunqe isahluko esiphefumlelweyo ukuba uqalise kwiqonga lakho le-Google Analytics oyifunayo ukuze uhlolwe. Amanqanaba amathathu afana nala alandelayo:
Ukutyelela ingxelo yePhepha leNkcazo.
Yenza ipharamitha engancedayo "Yokudlulisa ngokugcwele".
Yenza iSigaba esiPhakamileyo.